Big data, yakakosha tekinoroji mune ecommerce | ECommerce nhau
Big data, yakakosha tekinoroji mune ecommerce
E-commerce inozivikanwa zvekuti yakakurudzira kuvandudzwa kwe matekinoroji matsva akadai seBIG DATA izvo zvinorerutsa kugadziriswa kwemari yakakura yeruzivo.
Izvo zvikonzero zvinotyaira vatengi kuenda buy online Ivo vari nyore kwazvo, 91% yevatengi vepamhepo vanofunga kuti zvinobudirira kuendesa mitengo uye hapana zvinoshamisira ndiyo kiyi yekutenga zvinobudirira pamhepo.
Kune rimwe divi remari, isu tinayo maitiro ekudzoka kuti mune akawanda mapeji akaomarara uye anosanganisira marefu uye anonetesa maitiro, ayo akasiyana neakajairwa commerce unogona kudzoka ipapo ipapo.
El ECommerce chikamu kana zvemagetsi zvekutengeserana zviri mukusimudzira kwese. Kugadziriswa kwemashamba epasi rese kuri kufambira mberi nekukurumidza uye mune ese mabhizinesi zvikamu kuwedzera nekukurumidza kwenhamba yekutengesa mue-commerce zvichienzaniswa neyakajairika commerce inogona kucherechedzwa.
Kusara kwemamwe makambani kunozivikanwa, wese munhu asina yake online platform, iri kurega kuenda kwezviuru zvekutengesa pazuva, kubvira neinternet kuwana zvinhu zvekutengesa kubva chero kupi pasi pano ichokwadi.
1 Ndeipi mamiriro azvino muE-Commerce?
2 Saka chii chatinoziva nezvevatengi?
2.1 Kuti kune matatu akasiyana mhando dzevatengi vepamhepo munyika medu:
3 Ndiani anotenga zvimwe?
4 Chii chinonzi Big Data?
5 Iyo mbiru shanu dzeBig Data
5.1 Kana uchitaura nezve iyo pfungwa yezvakasiyana, zvinoreva kune mhando dzedata dzinogashirwa nesisitimu, idzi ndidzo 3:
Ndeipi mamiriro azvino muE-Commerce?
ECommerce inomiririra 11% yezvose zvakatengwa muSpain yakagadzirwa, fashoni inoramba iri chikamu chinonyoresa kuwanda kwemari kuyerera uye chinomiririra iyo 48% yekutenga yakaitwa online.
El ECommerce kukura isingamisike zvakafanana, inoputsa zvinyorwa zvayo zvekutengesa gore rega rega mu misi yakaita seChishanu Chishanu, Cyber ​​Muvhuro, Kisimusi kutenga uye zvinotarisirwa kutengesa muna Ndira naKukadzi Aya mazuva hapana mubvunzo kuti inguva yakakwira yekutengesa zvemagetsi uye dambudziko rakaomarara kune chikamu chekutakura uye chekushandisa munyika medu.
La ECommerce maitiro, inogona kuonekwa muchikamu chechipiri che eShopper Barometer', kuongororwa kwakadzama kunoitwa neDPDgroup nechinangwa chekuziva izvo zvinodiwa, hunhu uye zvakanyanya kukurudzira kwevatengi vepamhepo. Mhedzisiro yemushumo uyu inotipa panorama yakakura maererano ne zvazvino kutengesa zvinhu mu e-commerce.
Saka chii chatinoziva nezvevatengi?
Izvo zviripo kolme mhando dzakasiyana dzevatengi vepamhepo munyika medu:
Vatengi vakuru, iyo ine avhareji yemapakeji e5,3 akagashirwa pamwedzi uye zvavanotenga zvinomiririra 87% yekutenga kwese pamhepo kwakaitwa mugore.
Avhareji vatengi, iyo inogamuchira avhareji ye 2,7 mapakeji pamwedzi uye inomiririra 11% yehuwandu hwegore rese kutengesa pamhepo.
Vatengi vadiki, iine 1,3 mapakeji kana mashoma anotambirwa pamwedzi anomiririra 2% yemari yegore yakashandiswa paECommerce.
Ndiani anotenga zvimwe?
Tichifunga nezve zvambotaurwa pamusoro pekuti ECommerce yatomiririra 11% yezvose zvakatengwa zvakaitwa kuSpain, fashoni inoramba iri chikamu chinonyora chiitiko chikuru uye chinomiririra 48% ye kutenga pamhepo kwakaitwa kuSpain.
Iyo yakawanda kwazvo yekutenga inowira pamamirioni, nekuti zvinopfuura 57% vanobvuma kuti ivo vanotenga erudzi urwu rwezvigadzirwa kuburikidza netiweki.
Izvi zvinotevera zvinyorwa zve chepamusoro chepamusoro Ivo vanogara munzvimbo dzekutengesa dzinogadzira runako uye zvigadzirwa zvetekinoroji ne38% uye 36% zvichiteerana, yeiyo yakazara yeiyo kutenga online kuSpain. Chirevo ichi chinoratidza kubuda kwepamhepo kwekutenga chikafu chitsva nezvinwiwa munzvimbo dzepamusoro gumi, idzo muSpain dzakamira pa10% yekutengesa kwese. Pamusoro peizvi, 18% yevaSpanish vanotenga online, vanobvuma kuti kamwe chete pamwedzi vanotenga chikafu online.
Kuziva maonero evatengi vepamhepo iri a kiyi yekuita kuti ubudirire kana iwe uchida kupinda iyo ECommercuye. Isu tese tinobvumirana kuti kutenga kuri nyore uye kwakachengeteka kuchave nemhedzisiro mukubatanidzwa kwemamwe mabhizinesi anoitwa paInternet sezvo mutengi akagutsikana achidzokorora chiitiko ichi nekuchikurudzira kushamwari uye mhuri. Izvi zvinoratidzwa neichi chidzidzo chimwe chete, icho chinoratidza kuti 85% yevatengi vanofunga kuti kwavo kwepamhepo kutenga kwaive nyore uye 75% yeiyo yakazara vakagutsikana kwazvo nezvakaitika.
Big Data muchidimbu, kugadzirisa uye kuongorora huwandu hweruzivo kana data, iyo isingakwanise kurapwa nenzira yakajairika, neyakajairika mashandiro, sezvo ivo vachidarika iyo kugona kwesoftware uye vanodarika miganho ine izvi maererano nealgorithmic processing.
Yakadaro pfungwa inosanganisira kukura kwehunyanzvi mumatunhu akasiyana siyana Chemhondoro zvigadzirwa, tekinoroji uye masevhisi izvo zvakave zvakagadziriswa kugadzirisa kugadzirisa kwakawanda kwemazana akaumbwa, asina kuvakwa kana semi-akarongedzwa dhata angave mameseji pasocial network, maodhiyo faira, mifananidzo yedhijitari, fomu data, maemail, mafoni masaini, maseru, data reongororo. Mazuva aya vanogona kuuya kubva kuma sensors akasiyana siyana, makamera, scanner ekurapa, kana imaging.
Chinangwa chikuru cheiyo Big Data masisitimu, senge yehurongwa hwakajairika, kushandura iyo yakaoma data mune inowanikwa ruzivo uye inoonekwa iyo inobatsira kutora sarudzo munguva chaiyo.
Makambani nhasi, ivo vatoshandisa Big Data kuti vanzwisise chimiro, zvido uye hunhu hwevatengi vavo uye hupfumi hwevanhu, nezve zvigadzirwa kana masevhisi avanotengesa. Izvi zvakagadzirisa nzira iyo kukosha kunopihwa kumutengi sezvo ichibvumidza matanho ekugadzirisa nzira iyo kambani inotaurirana nevatengi vayo uye nemabatiro avanopa seinodiwa sevhisi.
Kubatanidza pfungwa yeBig Data nemadhorobha makuru edhata hachisi chinhu chemazuva ano. Mazhinji emakambani makuru anga achitogadzirisa huwandu hweruzivo, asi vakamanikidzwa kushandisa mamwe matekinoroji akadai seDataWarehouses uye zvishandiso zvine simba zvekuongorora izvo zvaizovatendera kuti vabate zvakakwana aya mavhoriyamu akakura, pasati pavapo nyowani Hadoop software. Iko kushanduka kwetekinoroji kwareva kuti mavhoriyamu eruzivo anobatwa nezvikumbiro izvi awanda zvakanyanya.
Mbiru shanu dze Big Data
Iwo matatu 'Vs' eBig Data ndiwo hunhu hukuru hwekuzvizivisa, izvi ndeizvi: Vhoriyamu, Kusiyana y Speed. Asi neruzivo rwakawanikwa nemakambani anopayona mune ino hombe manejimendi manejimendi manejimendi, dudziro yekutanga yakawedzerwa, ichiwedzera pazviri hutsva hunhu senge Veracity y Kukosha kwedata.
Inodaidzwa kuti Big Data kana mavhoriyamu akapfuura kugona uye kukwana kweyakajairika software, ingave Windows, Mac kana kunyange Linux, kuti igadziriswe pasina matambudziko.
Iyo vhoriyamu pfungwa iri pasi pechinogara ichichinja nekuda kweiyi inokurumidza tekinoroji kufambira mberi, iyo inobvumidza kugadziriswa kweanogara akakura mavhoriyamu eruzivo. Kujekesa izwi racho zvishoma, makuru evhoriyamu yeruzivo mazana kana zviuru zveTerabytes kana Petabytes, exponentially yakakura yakawanda kupfuura zvakajairwa zviuru zveGigabytes kuti komputa inoshandiswa kugadzirisa. Pfungwa iyi yehuwandu inosiyanawo zvakanyanya, nekuti zuva rega rega isu tinofunga kuwanda kwedata rakagadziriswa zvishoma.
Ruzivo kuti Datawarehouse inogona, ruzivo rwakarongeka rwakapfuura nemuhuwandu hwakawanda hwesefa yepamhando yepamusoro kudzora, kugona kuvimbisa kuti iyo ruzivo rwainogadzirisa ine yakatemwa kare kunyatso uye kururamisa.
Patinotaura nezve Big Data isu tiri kutaura nezvayo ruzivo runogona kunge rwakaumbwa semi kana kusava nerudzi rwekuumba. Kugadziriswa kweiyi isina kurongeka ruzivo kunoda tekinoroji yakasiyana uye inobvumidza mushandisi kuita sarudzo zvichienderana neruzivo rusiri rwechokwadi. Mazhinji eaya algorithms ane hukama ne epamberi fuzzy logic system kurapwa izvo zvisati zvave ne100% zvakagadzirwa.
Kutaura nezve pfungwa ye zvakasiyana-siyana, zvinoreva kune mhando dzedata dzinogamuchirwa nehurongwa, idzi ndidzo 3:
Pakupedzisira, pfungwa yekumhanyisa zviri pachena zvinoreva kumhanyisa uko iyo mavhoriyamu akakura e data anotambirwa, kugadziriswa uye kupihwa sarudzo. Izvo hazvigoneke kune ruzhinji rweyakajairika masisitimu anoshanda kuti akurumidze kuongorora huwandu hweruzivo, asi zvakakosha kuti ubatanidze iyo pfungwa yeicho chaicho-nguva data dhizaini yehunyengeri hwekuona masisitimu kana akawedzeredzwa akasarudzika akasarudzika ekupa, iyo inopihwa kune vatengi nhasi, uchifunga nezve izvo zvinhu zvaunoda, uye zvimwe zvinhu zvinosarudza zvinhu zvekushambadza izvo zvechokwadi zvinogona kukufarira.
Chokwadi, kupedzisa, chivimbo cheruzivo rwakagadziriswa, kubvisa dhata remhando yepamusoro, kugadzirisa kuvonekwa kwevamwe, senge nguva, hupfumi pakati pevamwe, izvo zvinobatsira kuita sarudzo zviri nani.
Pakupedzisira, inowedzerwa kukosha, kukosha kweruzivo rwakakosha kune bhizinesiKuziva kuti ndeipi dhata yekuongorora, kugadzirisa zvese maitiro, kugadzira preselection izvi zvakakosha kuti iite nekukurumidza uye nekujeka. Zvakawanda zvekuti yatove yechipiri inonyanya kudikanwa kuSpain.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » Big data, yakakosha tekinoroji mune ecommerce
Maitiro ekukwidza mitengo muecommerce yako